Boondheere oo ku biirtay degmooyinka ka haray tartan aqooneedka bisha Ramadan | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Boondheere oo ku biirtay degmooyinka ka haray tartan aqooneedka bisha Ramadan
Boondheere oo ku biirtay degmooyinka ka haray tartan aqooneedka bisha Ramadan
Muqdisho (SNTV)-Tartan adag ayaa waxa uu dhex-maray degmooyinka Boondheere iyo Warta-nabadda, waxaana ugu horreynba lagu bilaabay su’aalaha degmada Warta-nabadda oo iyada nasiib u yeelatay qorya tuurkii billowga tartanka.
Su’aalihii 7-ahaa ee loogu tala galay laba kamid ah ayay ka jawaabeen, waxa ay sidoo kale ka faa’ideystaan laba su’aalood oo soo haraarmartay degmada ay dariska yihiin ee Boondheere, sidaas ayayna ku hanteen dhibco gaarayo 8-dhibcood.
Degmada Boondheere oo iyana aan shideyn dab yar ayaa iyana su’aalihii la weydiiyay ay ka jawaabeen labo halka ay si ka faa’ideysi ah ay u heleen su’aal ka timid degmada ay dariska yihiin ee Warta-nabadda , waxa ayna sidaas ku heleen 6-dhibcood.
Intii lagu jiray tartanka ayay degmada Boondheere soo gudbiyeen cabasho, waxaana guddiga tartanka horey u shaaciyeen in wixii cabasha la soo gudbiyo habeenka tartanka lagu jiro, faham iyo sharaxaad dheer kadib waxa ay guddiga ku guuleysteen in ay qanciyaan degmada Boondheere.
Tartanka ay tabineyso warbaahinta Qaranka sidoo kale uu taaba gelinayo maamulka gobalka Benaadir ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa nasiib u yeeshay in waraagga 2-aad iska xaadiriyaan degmada Warta-nabadda halka Boondheere ay ku biirtay degmooyinka ku haray waraagga 1-aad.
Habeen dambe degmooyinka xeebta dhaca ee Cabdal-caziiz iyo Xamar-weyne ayaa ku ballansan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadan.
Previous articleku dhawaad 35million oo lacag ah ayaa ku baa-ba’day roobabkii ka da’ay Muqdisho
Next articleGen. Bashiir Ameeriko oo kulan dhiiri gelin ah la qaatay Haweenka ku jira Ciidanka Booliska Soomaaliyeed